Ihe ohuru ohuru nke Oppo Reno na - agbakwunye nkwado nkwado ọhụụ | Gam akporosis
Oppo ewebatala a mmelite ohuru nke ColorOS 6 maka ọkọlọtọ ọhụrụ ya, Oppo Reno.
Nke a, nke na-abịa na ụdị mbipute 'PCCM00-11-A.16', na-agbakwunye njikwa ngosi ọhụụ zuru oke na ngwaọrụ.
Na nkọwa, njikwa njikwa dị iche iche gụnyere ọrụ dị iche iche, dị ka nke na-enye gị ohere isi n'akụkụ abụọ nke ihuenyo ahụ rụọ ọrụ ụfọdụ.
Ibugharị site n'aka ekpe ma ọ bụ n'akụkụ aka nri nke ihuenyo na-ewega gị na ngwa gara aga. Mgbe ị na-swipe elu na ala nke ihuenyo, ọ na-ewe gị n'ụlọ ihuenyo. Mgbe ị na-emepe ngwa ndị na-adịbeghị anya, swipe elu na ala, wee kwụsịtụ n'etiti.
Usoro mmegharị ahụ bụ ihe ọzọ iji iji bọtịnụ mebere emejuputara na ekwentị gam akporo ruo oge ụfọdụ, mana ọ na-aga n'ihu na-enwe ndozi, gụnyere akara ọhụrụ nke Nkọwa 9.0. The Reno na-agba agba na ColorOS 6.0 dabere na os kwuru banyere OS na-ama nwere ụfọdụ ogbugbu akara atụmatụ, ma mmelite ahụ na-eweta ụfọdụ mmegharị ọzọ.
Mgba aka mmeghe na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ ekwentị gị mgbe ị nwere nghọta dị mma banyere mmegharị ahụ niile akwadoro. Ọzọkwa ekwe mfe otu aka ọrụ.
Na mmepe nke ọzọ, Onye isi oche Oppo Shen Yiren kwupụtara na Weibo na nke a malitere n'oge na-adịbeghị anya Oppo Reno 5G mbipụta ọ ghọwo nke mbụ 5G ama ama dakọtara na Europe. (Gụọ akụkọ zuru ezu ebe a)
Onye nrụpụta ahụ, nke bụ otu n’ime ndị ọrụ azụmaahịa mbụ 5G Switzerlandcom, butere ụzọ na Mepụta Oppo Reno 5G ama ama na Zurich, Switzerland. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ China jisiri ike bụrụ onye izizi wepụtara 5G ama azụmaahịa na ahịa Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » New Oppo Reno melite na-agbakwụnye nkwado ọhụụ